Izihloko zikaLindsay Boyajian Hagan ku Martech Zone |
Imibhalo nge ULindsay Boyajian Hagan
U-Lindsay Boyajian Hagan uyi-VP Yezokumaketha e- Conductor, idingida ukuthi amabhizinisi angadala kanjani amasu okumaketha edijithali ahlangene, amashaneli onke, futhi angagxili kunoma isiphi isiteshi esisodwa sodwa. Ubuye ajule ngokuthi kungani ukutshalwa kwezimali kwe-organic marketing kwanda kanye nokubaluleka kwakho embonini.
Izindlela Ezi-3 Zokumaketha Kwezinto Eziphilayo Kungakusiza Usebenzise Kakhulu Kusabelomali Sakho Ngo-2022
NgoLwesine, Februwari 3, 2022 NgoLwesine, Februwari 3, 2022 ULindsay Boyajian Hagan
Izabelomali zokumaketha zehle zaba irekhodi eliphansi lika-6% wemali engenayo yenkampani ngo-2021, yehle isuka ku-11% ngo-2020. U-Gartner, The Annual CMO Spend Survey 2021 Njengoba okulindelwe kuphakeme kakhulu kunangaphambili, manje isikhathi sokuba abakhangisi basebenzise imali ngokugcwele futhi balule amadola. Njengoba izinkampani zabela izinsiza ezimbalwa ekukhangiseni—kodwa zisafuna imbuyiselo ephezulu ku-ROI—akumangazi ukuthi imali esetshenziswayo yokuthengisa ikhula kakhulu uma iqhathaniswa nezindleko zezikhangiso.